के ebike Dockless सार्वजनिक बाइक भाडाको भविष्य हो? | ebike Shuangye
घर ब्लग समाचार के ebike Dockless सार्वजनिक बाइक भाडाको भविष्य हो?
मिति ： २०१-2021-०06-० Categories कोटीहरू ：समाचार दृश्य ： ० विचार
यद्यपि यो अमेरिका र युरोपमा एक बर्ष भन्दा पनि कम समय भएको छ, डकलेस बाइक सेयर विश्वभर छिटो फैलदैछ।
सिएटलमा चीनबाट experimentण लिइएको प्रयोगको रूपमा शुरू भएको कुरा त्यसबेलादेखि लस एन्जलसदेखि वाशिंगटन डीसीसम्म फैलियो र सार्वजनिक अधिकारीहरूले डलासमा अव्यवस्थित र फोहोर बन्ने कुरालाई नयाँ ढound्गले सुल्झाउने कोसिस गरे for एक जना अपरेटरले अगाडि चार्ज गरिरहेका छन्। डकलेस क्रान्तिमा अर्को प्रवृत्तिको साथ: इलेक्ट्रिक बाइकहरू।
जम्प, ब्रूक्लिनमा आधारित स्टार्ट-अप, सेप्टेम्बरमा डिसीमा सुरु हुँदा ई-बाइकहरू रोल आउट गर्ने पहिलो डकलेस कम्पनी बन्यो। गत महिना यसले सान फ्रान्सिस्कोमा ई-बाइक अपरेटिंग सुरु गर्न पहिलो सम्झौता पनि जित्यो। यस वर्षको लस भेगासमा उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स कार्यक्रममा लाइमबाइकले आफ्नै डकलेस ई-बाइकको अनावरण गर्‍यो। स्पिन र मोटिभेट जस्ता अन्य कम्पनीहरूले एकै समयमा इ-बाइक पाइलटहरूको घोषणा गरे। यहाँ सम्म कि उबरले कार्यमा सामेल भयो, घोषणा गरे कि यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई राइड सेयर अनुप्रयोग प्रयोग गरेर जम्प बाइकहरू फेला पार्न अनुमति दिनेछ।
नयाँ टेक्नोलोजीहरूको दायराले यी उदाउँदो ई-बाइक नेटवर्कहरू सम्भव बनाउँदछ। ल्यापटप जस्ता उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्सको विकासले सुधारिएको लिथियम-आयन ब्याट्री चालु गरेको छ जुन हल्का र लामो समयसम्म चार्ज राख्छ। जीपीएस र सेल स in्केतहरूमा प्रगतिहरूले मेट्रो क्षेत्र वरपर साइकलको फ्लीट ट्र्याक गर्न सजिलो बनाउँदछ। र युरोप र एशियामा बढ्दो मागको कारण, टोक़ सेन्सर र मोटरहरू जस्ता कम्पोनेन्टहरू अधिक किफायती र गुणस्तरमा उच्च भएका छन्।
"सहि कम्पोनेन्टहरू जुन अहिले हाम्रो बाइकमा छन्, ती कम्पोनेन्टहरू डेढ बर्ष वा दुई बर्ष पहिले पनि उपलब्ध थिएनन्," जम्पका सीईओ र्यान आरजेपेकले भने। "हाम्रो बाइकको तिनीहरूमा mile० माईलको दायरा छ, जसले हामीलाई अत्यन्त व्यवहारिक गरिरहेको छ।"
धेरै जसो डक रहित बाइक सेयर प्रणाली संग समान सेटअप छ। राइडरहरूले फोन अनुप्रयोग डाउनलोड गर्दछ, जसले उनीहरूलाई उनीहरूको क्षेत्रमा उपलब्ध बाइकहरू भेट्टाउन अनुमति दिन्छ। त्यसोभए तिनीहरू बाइक छनौट गर्दछन्, यसको आईडी नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् वा क्यूआर कोड स्वाइप गर्नुहोस्, र बाहिर लैजानुहोस्, जहाँ-जहाँ उनीहरूका लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ फेरि लक गर्नुहोस्। इ-बाइक थपेमा प्रक्रिया सामान्य भन्दा केही महँगो हुन्छ: यसको इलेक्ट्रिक फ्लीटको लागि, लाइमबाइकले सवारीको लागि $ १ र त्यसपछि १० मिनेट प्रयोगको लागि अर्को डलर चार्ज गर्दछ, जुन आधा घण्टाको यात्राको लागि $ to हो। यसको परम्परागत पेडल-पावर बाइकहरू, तुलना गरेर, प्रत्येक $० मिनेटको सवारीको लागि $ १ मात्र चार्ज गर्दछ। जम्प शुल्क पहिलो आधा घण्टाको लागि $ २ र प्रत्येक अतिरिक्त मिनेटको लागि c सेन्ट।
यस मोडेलमा केही चुनौतिहरू छन्, पाठ्यक्रममा कसरी बाइकहरू उपलब्ध हुने छन् त्यहाँ कसरी समावेश गर्ने भन्ने बारे सहित। जम्प यसको प्रणाली सन्तुलनमा राख्न ग्राउन्ड टीमहरूमा निर्भर गर्दछ। "यस अपरेशनको ठूलो अंश भनेको भ्यानमा बाइक स collecting्कलन गर्ने, बाइक सर्वि, गर्ने, र बाइकलाई आवश्यक्ताता अनुसार सार्ने काम हो।" रेजेपेकीले भने। GPS र सेल स्केतहरूले टोलीलाई फ्ल्याग गर्न बाइकलाई अनुमति दिन्छ जुन बाइकमा सारिएको छैन र तिनीहरूलाई अधिक लोकप्रिय क्षेत्रमा फर्कन्छ।
Tags:सार्वजनिक बाइक भाडा
अघिल्लो: Shuangye १२ th औं अनलाइन क्यान्टन फेयरमा स्वागत छ
अर्को: DIY इलेक्ट्रिक बाइक को लागी Bafang मध्य ड्राइभ किट